Isikhwama sesikhumba se-Vittoria - Isikhumba se-Pisa Pelle Italian
Sebenzisa "I-10REG " Okunye ukwehliswa kwe-10% kuyo yonke inqola kuthunyelwe i-imeyili kuwe ngokuzayo.
Ukuhanjiswa Kwamahhala Komhlaba Wonke Kuphela NgoMsombuluko ngoJulayi 8.
Bhalisa bese Gcina
Ucingo noma Umbhalo 214-444-9482
Zonke izigaba Zonke izigabaubhakaibhandeBriefcasebambaisikhwama esiphambanweniIsikhwamaHobolaptopisikhwama sokwenza izimonyoisikhwama samadodaibhande lamadodaisikhwama samadodaisikhwama sesithunywaisikhwama sehlombeIsikhwama Sokuhambaisikhwama okhalweniisikhwamaibhande labesifazaneIsikhwama sowesifazaneibhande labesifazane
I-BRL R $
I-NIO C $
IPEN S /.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yami
Faka i-imeyili ne-password yakho:
Dala i-akhawunti yakho
Phinda usebenzise iphasiwedi
Faka i-imeyili yakho:
Ukhumbule iphasiwedi yakho?
Dala i-akhawunti yami
Sicela ugcwalise imininingwane engezansi:
Usuvele unayo i-akhawunti?
Chitha $ 50 ngaphezulu futhi uthole ukuthunyelwa kwamahhala!
Thenga imikhiqizo yethu
Isikhwama sesikhumba seVittoria
Umbala: Faka umbala Bordeaux
Umbala Bordeaux - $ 190.00Umbala omnyama obomvana - $ 190.00Umbala Grey - $ 190.00Umbala Omnyama - $ 190.00Umbala wokukhanya obomvu - $ 190.00
Yabelana lo mkhiqizo
Idizayini engaphelelwa isikhathi nemininingwane esesikhathini yenza iVittoria eS Saffiano lesikhumba ikhabethe elibalulekile kowesifazane osebenzayo. Izici ezisebenzayo zihlangana nokuthambeka okungahambeki kwesikhwama sebhizinisi enqolobane okhethekile.
Ubude: 25 cm 9.8 in
Ububanzi: 13 cm 5.1 in
Ukuphakama: 20 cm 7.8 in
Amabhele amabhande_ 104 cm 40,9 ku
Isibambo: 32 cm 12.5 in
Ukuvalwa kohlobo lokuvalwa_Lombumbulu
Izingcezu zensimbi_ umbala wegolide
Izitho zangaphakathi_ 2
Isisindo: 0,6 kg 1.3 lb
I-Pisa Pelle ingumngeneleli waseMelika Osetshenziselwa Imikhiqizo Yesikhumba yase-Italy. Imikhiqizo yethu yonke iyi-100% yemvelo iCalfskin, iVegetable Tanned, ne-Handmade eFlorence, e-Italy ngebhizinisi lomndeni elinabanikazi. Ezinye izinto ezithandwa kakhulu zigcinwa kusakhiwo eFlorence, e-Italy. Ezinye izinto zakhiwa uma uzi-oda.
Sithumela Umhlaba Wonke ngeFedEx Express ne-DHL Express
Njengoba sinendawo yokugcina izinto kanye nokwenza izinto eFlorence, e-Italy. Sizothumela ukuthengwa kwakho kuwe ngaphandle kokulinda isikhathi eside. Eminye imikhiqizo yenziwe ngezandla uma u-oda. Lokhu kuzothatha izinsuku ezingeziwe ezingama-5 zokuthumela ngomkhumbi. Isiginesha iyadingeka lapho uhanjiswa.
Ama-Americas: Izinsuku ze-1-5. Europe: Izinsuku 1-5. Asia: Izinsuku 5-10. Africa: Izinsuku 5-10. Australia: 5-10 usuku.
UKUSHINTSHA KUMAHHALA KUZO ZONKE IZIMAHLA eziya e-USA.
Izintela zase-USA Nexus zikhokhiswa Izakhamizi zaseTexas kuphela.
I-European Citizens VAT okwamanje ayikhokhiswa.
Ukubuyiselwa Kwezinsuku Ezingama-30: Isiqinisekiso Sezinyanga ezingama-24
Inqubomgomo yethu ihlala izinsuku ezingu-30. Uma izinsuku ezingu-30 zidlule kusukela ekuthengeni kwakho, ngeshwa asikwazi ukukunikeza ukubuyiselwa imali noma ukushintshaniswa.
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa, into yakho kumele ingasetshenzisiwe futhi esimweni esifanayo ukuthi uyitholile. Kumele futhi kube emaphaketheni okuqala.
Sicela usithumele i-imeyili ku-Sales@PisaPelle.com uma uzizwa ungaphandle kwemithetho futhi sizobheka zonke izimo ngesizathu.
Sicela ubheke inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali egcwele ngezansi kwekhasi ukuthola eminye imininingwane.
Ukubuyiselwa kwemali Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingama-1-7 ukucubungulwa.
Ngokususelwa ekubukeni kwe-1 Bhala ukubuyekeza
Mayelana nePisa Pelle
UPisa Pelle unesifiso sempahla eyenziwe ngezandla nezobuciko. Sinezingcweti ezihle kakhulu eFlorence, Tuscany, Italy. UFlorence inhliziyo nomphefumlo wokukhiqizwa kwesikhumba okunethezekile emhlabeni ngezimfihlo zohwebo zidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane.
© Pisa Pelle Isikhumba sase-Italy
Amazon American Express Apple Pay Club Diners Discover I-Google Pay I-JCB Mastercard PayPal Thenga Pay Venmo show